"La Favorita", Aurora García Mateache, akụkọ ịhụnanya n'etiti Alfonso XII na Elena Sanz | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
«La Favorita», Aurora García Mateache, akụkọ ịhụnanya n'etiti Alfonso XII na Elena Sanz
Fewbọchị ole na ole gara aga ọ rere Ihe kacha amasị, akwụkwọ ọgụgụ nke Aurora Garcia Mateache, onye nnọchiteanya nke Royal Household maka akwụkwọ akụkọ ahụ Ihe kpatara ya, na-akọ akụkọ ịhụnanya n'etiti Alfonso XII na onye na-egwu opera bụ Elena Sanz.
Na akụkọ akụkọ a, nke mbụ nke onye dere ya ma bipụtara ya Akụkụ nke Akwụkwọ, anyị ga-achọpụta akụkọ banyere otu nwanyị nke tinyere Europe dum n'ụkwụ ya n'olu ya, rue mgbe mmụọ nke eze mara ya ikpe ịgbachi nkịtị.
Elena Sanz, akụkọ ya
N'etiti narị afọ nke iri na itoolu, na ụlọ ọgwụ nke Las Chicas de Leganés, nwa agbọghọ Elena Sanz rọrọ na, otu ụbọchị, ọ ga-abụ opera na Teatro Real na Madrid. Nkà ya na ịma mma ya mere ka ọ merie nrọ ya niile. N'ihi olu ya, o meriri usoro nke Europe niile, site na igbe eze nke Tsar Alexander II ruo n'obi Emilio Castelar, bụ onye kọwara ya dị ka chi Ijipt nke ịma mma Antonio de Roma lara n'iyi. Mana ihe Bella del Re na-echetụ n'echiche bụ na ọ ga-ekerịta ọdachi jọgburu onwe ya nke agwa ahụ dugara ya na ama: Ihe kacha amasị site n'aka Donizetti. Dị ka onye hụrụ Alfonso XI n'anya, a chụpụrụ Elena maka ịhụnanya nke eze, n'ọnọdụ a, Alfonso nke Iri na Abụọ.
Tọrọ atọ na ọnụọgụ aghụghọ, ekworo, aghụghọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị elu, contralto nyere ụmụ nwoke abụọ na-ezighi ezi nye eze ahụ bụ onye kpatara mkparị nke ọha mmadụ nke oge ahụ na ọchịchọ maka ikpe ziri ezi nke otu eze nwanyị kachasị ike na Europe niile, onye ọchịchị Maria Cristina nke Habsburg. Enweghị ndekọ fọdụrụ nke anwansi na olu ya. A machibidoro aha ya iwu. Mana akụkọ ịhụnanya ya, nke a katọrọ tupu a mụọ ya, ekwughachiri ya na akwụkwọ akụkọ a na-adabere na njedebe nke ngọngọ na aghụghọ Europe nke Empress Eugenia de Montijo, Sofía Troubetzkoy, Cánovas del Castillo, Albéniz na Conan Doyle.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » «La Favorita», Aurora García Mateache, akụkọ ịhụnanya n'etiti Alfonso XII na Elena Sanz
A na-ebipụta mmezi na 'Okooko Osisi nke Ọjọọ' na France